July 19, 2021 - ApannPyay Media
July 19, 2021 by ApannPyay Media
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဖြင့် သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ (သာဓု သာဓု သာဓု) ကျန်းမာရေးအခြေအနေက မသေချာတော့လို့ သံဃာတော်ပင့်ပြီး ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် သရဏဂုံဆောက်တည် သီလယူသတဲ့။ ဆရာတော်ကလည်း PPE ဝတ်ကာ အကျိုးဆောင် ကြွပေးတယ်။ အဖြစ်အပျက်နဲ့ သတင်းပုံလေးကို မြင်ရတော့ အလှူရှင်ရဲ့ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရမှုကို ဝမ်းနည်းမိတာထက် အလှူရှင်ရဲ့ အသိနဲ့ သတိကို လေးစားအားကျတဲ့ စိတ်ကပိုနေမိပါတယ်။ လောကကြီးနဲ့ လူ့ဘဝကြီးမှာ အသိဟာ ဝယ်ယူလို့ရတယ်။ လေ့လာသင်ယူလို့ရတယ်။ မေးယူလို့ရတယ်။ လူတိုင်းမှာ အသိရှိနေတတ်ကြတယ်။ သို့သော် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရှိနေတဲ့ အသိတွေကို ထုတ်သုံးဖို့ သတိမေ့နေတတ်ကြတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် သိရှိပြီးဖြစ်နေတဲ့ တချို့သော အသိနဲ့ သတိတရားတွေဟာ များစွာသောအမှောင်တွေအောက်မှာ နစ်မြုတ်နေတတ်ကြတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ထိုအလှူရှင်သည် ထိုအလှူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို … Read more
နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ပြုပြင်နည်း သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်၅-မျိုးနဲ့ ပြုပြင် ယူလို့ရပါတယ်။တိုက်တွန်းစကားအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ ” နင်နေ ငါသွား ” ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ် အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကတော့… ၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဂုဏ်တော် ၄။ မေတ္တာ ၅။ ဝိပဿနာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို နေ့စဉ် ဖြစ်စေရမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြီး နေ့စဉ် ပြုလုပ် သွားဖို့ပါပဲ။ ၉။ ငါးမျိုးကုသိုလ် ဘယ်လိုပြုရမယ်။ ၉-၁။ ဒါန ပထမဆုံးကုသိုလ်က ဒါန … Read more
အပြင်မှာကြက်ပေါင်းရည်ဝယ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ ကြက်ပေါင်းရည်လုပ်နည်းလေး ပြန်လည်၍ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်
အပြင်မှာကြက်ပေါင်းရည်ဝယ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ ကြက်ပေါင်းရည်လုပ်နည်းလေး ပြန်လည်၍ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် အပြင်မှာကြက်ပေါင်းရည်ဝယ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ကြက်ပေါင်းရည်လုပ်နည်းလေး ပြန်လည်၍ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကိုယ်လည်းအပြင်မထွက်တာ ၁ပတ်လောက်ရှိပြီမို့ရှိတာလေးနဲ့လုပ်ပြထားပါတယ် ။ ကြက်ပေါင်းရည်ဆိုတာကြက်ကိုပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့အရည်ချိုကိုပြောတာပါ ။ ကြက်သား ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ နံနံပင်အမြစ်တို့လိုပါတယ်ကြက်သားကိုရေစင်အောင်ဆေးပါ နံနံပင်ရဲ့အမြစ်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပါဂျင်းကိုအခွံခွာပြီး မထူမပါးလွီးပါကြက်သွန်ဖြူအမွှာကိုခွာယူပြီး ရေဆေးပါ(အခွံမခွာပါဘူးရှင် အခွံနဲ့တစ်ပါတည်းထည့်ပေါင်းမှာပါ ) ဇောက်နက်တဲ့ပန်းကန်ထဲကို ပန်းကန်လုံးအသေးလေးတစ်လုံးမှောက်ထည့်ပါ သူ့အပေါ်မှ ကြက်သား ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ နံနံပင် ဖြန့်ပြီးထည့်ပါ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲကို ရေထက်ဝက်ခန့်ထည့်ပြီး အပေါ်ကန့်သုံးကာ ၂နာရီခန့်ပေါင်းပါ အဖုံးမဖွင့်ကြည့်ပါနဲ့ ကြက်ပေါင်းရည်ရဖို့ အချိန်၂နာရီကလုံလောက်ပါတယ်ရှင် ကြက်ပေါင်းရည်လိုတာထက်ပိုထွက်ချင်ရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပါရှင် ဇစ်အိတ်လေးတွေထဲ ရေခဲတုံးလေးတွေထည့်ပြီးအိုးအဖုံးပေါ်ကို တင်ပေးပါရှင်ဘယ်အချိန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ အချိန်ပြည့်ဖို့ ၅မိနစ်၁ဝမိနစ်အလိုလောက်မှာလုပ်လို့ရပါတယ် ဘာအရသာမှုန့် ဘာဆားမှမထည့်ပါဘူးကြက်ကတော့ ဗမာကြက်အသုံးပြုတာအကောင်းဆုံးပါရှင် ။ ကြက်ပေါင်းရည်ထဲမှာအဆီတွေဝေ့နေတာ မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် ကြက်ပေါင်းတဲ့အခါကြက်အရေခွံကိုဖယ်ပြီးပေါင်းပေးပါရှင့် ။ Credit Htun Thiri မူရင်းပိုစ့်ပိုင်ရှင် မမအားcredit ပေးပါသည်။ … Read more
ဒီနေ့ Oxygen မလိုပဲ အသက်တစ်ချောင်း ကယ်လိုက်နိုင်တယ်
ဒီနေ့ Oxygen မလိုပဲ အသက်တစ်ချောင်း ကယ်လိုက်နိုင်တယ် အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေ ရောက်နေချိန်ဘယ်သူ့အကူအညီမှ မရတာ သေချာနေတော ့မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့ပဲ လုပ်ကြည့်တယ် Oxygen ပြန်တက်လာခဲ့တယ် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နည်းလေး ၁။ ရေနွေးကို ဆူအောင်တည် ဆူပွက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဂွေးတောက်ရွက်နဲ့ပင်စိမ်းရွက်ကို အရွက်လေးတွေချွေပြီး ထည့်ပါတယ် (အနံ့လေးသင်းနေတာ)ရလာတဲ့ရေနွေးငွေ့နဲ့အနံ့ကို စောင် ခေါင်းမြီးခြုံပြီးရှူခိုင်းထားပါတယ်… ၂။ ကြက်ဥအစိမ်းကို ဖောက် သံပရာသီး သကြားနဲ့ ခလောက်ပြီး သောက်ခိုင်းပါတယ် ၃။ နာရီဝက်လောက် မှောက်အိပ်ခိုင်းပါတယ် ၄။ ဂျင်းပြုတ်ရည်ပူပူလေး တိုက်ပါတယ် ၅။ လေဝင်လေထွက် ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ နေခိုင်းပါတယ် (အလုံခန်းထဲမှာ မနေကြပါနဲ့) Oxygen မရလို့ အရမ်း စိတ်ပူမနေကြပါနဲ့ရှင် Credit To Original ဒီေန႔ Oxygen မလိုပဲ … Read more
သွေးတိုးစေမည့် အစာများနှင့် သွေးတိုးကျစေမည့် အစာများ
သွေးတိုးစေမည့် အစာများနှင့် သွေးတိုးကျစေမည့် အစာများ သွေးတိုးရောဂါရှင်တွေဟာ အစားအသောက် ကို ဂရုစိုက်ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သိကြပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို အစားအသောက်တွေကို တိတိကျကျ ထိန်းချုပ်သင့်ပြီး ဘယ်လို အစားအသောက် တွေကိုတော့ စားသောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုလည်း သေချာနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါရှင်များ ထိန်းချုပ်သင့်သော အစာများ ဆားနှင့် ဆိုဒီယမ် သင်စားတဲ့ အစာထဲမှာ ဆား (NaCl) နဲ့ ဆိုဒီယမ် (Na) ကို လျှော့စားခြင်းဟာ သွေးတိုးကျ စေပါတယ်။ သင့်မှာ သွေးတိုးရောဂါရှိရင် တစ်နေ့လုံး သင်စားတဲ့အစာတွေထဲမှာ ဆား ၁.၅ ဂရမ်ထက် လျော့နည်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်က ငန်တဲ့အစာတွေ အထူးသဖြင့် ပါကင်ထုတ်ထားတဲ့ အဆင်သင့် အစားအစာတွေနဲ့ စည်သွပ်ဘူးတွေကိုရှောင်ဖို့ … Read more
အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ အတွက် သိမ်းထားသင့်သော အဖိုးတန် ဆေးမြီးတိုများ
အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ အတွက် သိမ်းထားသင့်သော အဖိုးတန် ဆေးမြီးတိုများ ၁။ သွေးတိုးလို့သွေးကျလိုလျှင် သံပုရာသီးတစ်လုံးကို ၁၅ မိနစ်ခန် ့ကြာအောင်ရေစိမ်ပြီး အရည်ညှစ်၍ ကြက်ဥတစ်လုံး ဖောက်ထည့်ကာ ရောမွှေ သောက်လိုက်ပါ။ သွေးကျဆေး အထူးသောက်စရာ မလိုဘဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၂။ အပူကျိတ်ဖြစ်ရင် ပါးချိတ်အောက်နှင့် ပေါင်ကြားတို ့တွင် ပေါက်တက်သော အပူကျိတ်များကိုပျောက်လိုလျှင် နနွင်းခါးဥကို သွေးလိမ်းပါ။ သုံးကြိမ်မျှ လူးရုံ လိမ်းရုံနှင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၃။ အိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်လျှင် ဒန် ့ကျွဲမြစ်ကိုပြုတ်၍သကြားအနည်းငယ် ထည့်ပြီးသောက်ပါ။တစ်ခါသောက်လျှင် အကြမ်းပန်းကန်နှင့်တစ်လုံးသောက် ည ၊ နံနက် သောက်ပါ။ အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်းစေမည်။ ၄။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဖြစ်လျှင်​ ကစော့ပုပ်မြစ်ကိုအခြောက်လှန်း အမှုန် ့ပြုပြီး ပျားရည်နှင့်သောက်ပါ။ ရက်မရှည်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၅။ အမျိုးသမီးများ … Read more
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ဖခင်ကြောင့် ကလေးရင်ကြပ်ရောဂါရနိုင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ဖခင်ကြောင့် ကလေးရင်ကြပ်ရောဂါရနိုင် ကလေးတွေဟာ အမိဝမ်းထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဆေးလိပ်သောက်မှုကြောင့် မွေးရာပါ ရင်ကြပ်ရောဂါ ရနိုင်ကြောင်း မျိုးဇီဇ DNA အပေါ် ဓာတုဗေဒသက်ရောက်မှု လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ သိရသည်။ မိဘတွေရဲ့ ဆေးလိပ်သောက်မှုဟာ ကလေးတွေငယ်တွေရဲ့ ရင်ကြပ်ဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ်ကို တိုးလာစေပါတယ်။ လက်တလော လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ဆေးလိပ်သောက်မှု တစ်ခုထဲကြောင့် မဟုတ်တာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ သုတေသီတွေဟာ ကလေးငယ်ပေါင်း ၇၅၆ ယောက်ကို ၆ နှစ်ကြာ အနီးကပ်ဆက်တိုက် လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကလေး ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ သန္ဓေသားဘဝနဲ့ ရှိနေစဉ်ကာလထဲက ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ဖခင်ကြောင့် ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ခံထားရပါတယ်။ ကျန်ကလေး ၃ ယောက်ရဲ့ မိခင်တွေကတော့ … Read more
ကလေးတွေရဲ့ ကျိုးသွားတဲ့ ငယ်သွားတွေကို လုံးဝ လွှင့်မပစ်သင့်တဲ့ သတိပြုဖွယ် အကြောင်းအရင်း…….
ကလေးတွေရဲ့ ကျိုးသွားတဲ့ ငယ်သွားတွေကို လုံးဝ လွှင့်မပစ်သင့်တဲ့ သတိပြုဖွယ် အကြောင်းအရင်း……. လူတိုင်းရဲ့ဘဝ မှာ ပထမဆုံးကျိုးသွားတဲ့ ငယ်သွားလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရတွေ ရှိနေမှာပါ။ ကျိုးသွားတဲ့ ငယ်သွားလေးတွေကို ခေါင်မိုးပေါ် ပစ်တင်လိုက်တာမျိုး၊ နတ်သမီးလေးကို ပေးလိုက်တာမျိုးလေးတွေလည်း လုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ တစ်ချို့မိဘတွေကျတော့လည်း ကလေးရဲ့ငယ်သွားလေးတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သိမ်းထားတတ်ကြပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကလေးတွေရဲ့ ကျိုးသွားတဲ့ ငယ်သွားလေးတွေကို လုံးဝလွှင့်မပစ်ဘဲ သိမ်းထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုပြုချက်အရ ကလေးတွေရဲ့သွားလေးတွေကို သိမ်းထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးကတော့ သွားလေးတွေထဲက ဆဲလ်လေးတွေက နောက်ပိုင်းမှာ အသုံးဝင်လာနိုင်လို့ဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကိုတောင် ကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်ကို ဆောက်ဖို့ အုတ်ခဲလေးတွေအများကြီးနဲ့ ဆောက်ရသလို၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း တူညီတဲ့ ဆဲလ်လေးတွေ အများကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ … Read more
“အပူထုတ် ရေချိုးနည်း” – ဆရာကြီးဦးရန်အောင် (သြ/သု) လူတွေမှာ ငုပ်လှောင်အောင်းတဲ့ အပူတွေရှိပါတယ်။ ဒီအပူတွေကို ရေချိုးပြီးမထုတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အောင်းပူတွေကို စံနစ်တကျမထုတ်ဘဲ ကန်ထွက်စေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေချိုးနည်း မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရောဂါရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ လူတိုင်းအတွက် အောင်းပူတွေ ထွက်စေမယ့် ( အနှိပ်မခံဘဲ ) အပူထုတ်တဲ့နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်။ ၁ = ရေမချိုးခင် အပူထုတ်နည်း – မန်ကျည်းရေ ခပ်ကျဲကျဲ ခပ်ပါးပါးလေး ခန္တာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ပွတ်ပါ။ ၂ = ဆားနည်းနည်းဖြင့် ဘယ်ခြေဖဝါးကို ညာလက်ဖဝါးနဲ့၊ ညာခြေဖဝါးကို ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးနဲ့ အလျားလိုက် အကြိမ် ၅၀ – ခန့် ပွတ်ပါ။ ၃ = ၁၀ … Read more
အာဇာနည်နေ့မှာ သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့တဲ့ သားကြီးအောင်ဆန်းဦး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင် အာဇာနည်(၉)ဦး ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဇူလိုင်လ (၁၉ )ရက်နေ့ အာဇာနည်နေ့ကတော့ ဒီကနေ့မှာဆိုရင် (၇၄)နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်..။ အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် ယခု(၂၀၂၁)ခုနှစ်မှာတော့ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး..။ အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူများအားလုံး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စည်ကားစွာကျင်းပခဲ့ကြပေမယ့် ဒီကနေ့မှာတော့ ပြည်တွင်းရေးမငြိမ်သက်မှုတွေအပြင် ကပ်ရောဂါဆိုးတွေကြောင့် ခြောက်သွေ့ခဲ့ရပါတယ်..။ ပြည်ပမှာ အခြေချနေထိုင်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သားကြီးဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ အာဇာနည်တွေအတွက် ရည်စူးကုသိုလ်တွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်..။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့ ဒေါ်လဲ့လဲ့သိန်းတို့က San Diego, California နေအိမ်မှာ … Read more